Trusty Shops|Combantrin Chocolate Worm
Automotive & Vehicle (0)
Combantrin Chocolate Worm
Product Code: oz0284
Australia မှထုတ်လုပ်သော combantrin သံချဆေး ချောကလပ်ဟာ သံကောင်, တုတ်ကောင်, သံပြားကောင်တွေကို ချေဖျက်ပေးပြီး ဝမ်းမှတဆင့် စွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။ တစ်ဘူးမှာ အထုတ် ၄ထုတ်ပါပြီး တစ်ထုတ်မှာ ချောကလပ် ၆တုံးပါပါတယ်။ တကယ့်နို့ရယ် ချောကလက်ရယ်ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ တစ်နှစ်အထက် ကလေးနှင့် လူကြီး များစားသုံးနိုင်ပြီး အညွှန်းမှာ ပေါင်ချိန် ၂၀ မှ ၅၅ပေါင် အထိ -- ၁ သို့ ၂ တုံး ပေါင်ချိန် ၅၆ မှ ၁၀၀ အထိ -- ၃ သို့ ၄ တုံး ပေါင်ချိန် ၁၀၁ မှ ၁၂၅ပေါင် အထိ -- ၅ တုံး ပေါင်ချိန် ၁၂၆ မှ ၁၅၅ ပေါင် အထိ -- ၆ တုံး ပေါင်ချိန် ၁၅၆ -- ၇ တုံး ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး စားပေးပါ။ အစာနှင့်ဝေးသည့်အချိန်စားပါ။ ဝမ်းလျှောနေချိန် ဖျားနေချိန်မျိုးတွင် မစားသင့်ပါ။
Australia မှထုတ်လုပ်သော combantrin သံချဆေး ချောကလပ်ဟာ သံကောင်, တုတ်ကောင်, သံပြားကောင်တွေကို ချေဖျက်ပေးပြီး ဝမ်းမှတဆင့် စွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။ တစ်ဘူးမှာ အထုတ် ၄ထုတ်ပါပြီး တစ်ထုတ်မှာ ချောကလပ် ၆တုံးပါပါတယ်။ တကယ့်နို့ရယ် ချောကလက်ရယ်ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
You're reviewing: Combantrin Chocolate Worm
Life-Space Probiotic Powd ...
Life-Space Probiotic Powder for Children
ကိုယ်ခံအား၊ အစာချေခြင်းနှှင့် အူလမ်းကြောင်း စနစ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော ဘက်တီးရီးယား ပါရှိသည်။
Nature's Way Vita Gummies ...
Nature's Way Vita Gummies Multi Vitamin + Veggies
Nature’s Way Kids Smart F ...
Nature’s Way Kids Smart Fish Oil High DHA Trio
အသီးသုံးမျိုးပေါင်းအရသာဖြင့် ၀ါးစားနိုင်သည့် ငါးကြီးဆီ
Nature's Way Kids Smart D ...
Nature's Way Kids Smart DHA 300mg Triple
ဦးနှောက်နှင့် လေ့လာသင်ယူမှုအားကောင်းစေရန်အတွက် Omega-3 DHA